Waa maxay Falanqaynta Kooxda Google Analytics? Hagahaaga oo faahfaahsan | Martech Zone
Waa maxay Falanqaynta Kooxda Google Analytics? Hagahaaga faahfaahsan
Google Analytics ayaa dhowaan soo kordhisay muuqaal aad u fiican si loo falanqeeyo saameynta daahitaanka ee martidaada oo loo yaqaan falanqaynta koox-kooxeed, taas oo ah nooca beta ee taariikhda helitaanka kaliya. Kahor intaan cusub lagu daray, maamulayaasha websaydhada iyo falanqeeyayaasha internetka ma awoodi doonaan inay hubiyaan jawaabta daahsan ee soo booqda degelladooda. Aad bay u adkayd in la go'aamiyo in booqdayaasha X ay booqdeen goobtaada Isniinta markaa intee ka mid ah booqday maalinta xigta ama maalinta xigta. Cusub ee Google falanqaynta kooxda muuqaalka ayaa kaa caawin doona inaad hesho oo aad falanqeyso xogtan si loo kordhiyo kaqeybgalka websaydhkaaga.
Waa maxay "Kooxo"?
Cohort waa eray loo adeegsado in lagu qeexo koox dad ah oo isku urursaday isla sifo isku mid ah. Google wuxuu adeegsaday ereyga "cohort" si uu u qeexo saameynta daahday ee Analytics iyo in la abuuro nooc kale oo waqti la tijaabiyey ah si loo falanqeeyo dhaqanka isticmaalaha. Kahor intaan lagu soo darin muuqaalka Google Analytics, way adkayd in la falanqeeyo wada-hawlgalayaasha sida soo iibsiga taariikhda, laakiin tan hadda waa lagu awoodsiin karaa iyadoo la adeegsanayo doorsoomayaasha gaarka ah iyo dhacdooyinka.
Sida loo Isticmaalo Falanqaynta Kooxda
Waxaad si fudud ugu heli kartaa muuqaalka falanqaynta ee qaybta dhagaystayaasha ee lagu soo bandhigay dhinaca bidix ee bidix ee Google Analytics. Markaad gujiso, waxaad arki doontaa shax garaaf ah oo uu ku xigo miis. In kasta oo jadwalku adkaan karo in la fahmo jaleecada hore, ha ka welwelin maxaa yeelay waxaan fududayn doonaa fahamka. Jaantuska caadiga ah wuxuu metelaa celceliska celceliska heerka (%) ee booqdayaashaada gaarka ah toddobadii maalmood ee ugu dambeysay, 14, 21, ama 30 maalmood.
Jadwalka hoose, waxaad ku arki doontaa Abriil 1, 2015 (safka saddexaad), 174 isticmaaleyaal gaar ah ayaa booqday websaydhka, kaas oo loo isticmaali doono inuu metelo maalinta 0. Hadda, fiiri maalinta 1 ee sadarka saddexaad si aad u aragto inta oo ka mid ah 174 booqdayaasha ayaa booqday bogga dambe. Bishii Abriil 2, 2015, 9.2% ayaa soo laabtay kaliya 4.02% ayaa booqday Abriil 3, 2015. Waxaad ka hubin kartaa isla wax safka afraad si aad u ogaato imisa ka mid ah 160 soo booqdayaal u gaar ah ayaa soo booqday boggaaga Abriil 3, Abriil 4, Abriil 5 , iyo wixii la mid ah.
Celcelis ahaan toddobo maalmood oo wadartoodu tahay 1,124 soo booqdayaal ah ayaa lagu arki karaa safka koowaad, kaasoo lagu matalayo garaafka sare.
Illaa iyo hadda, waxaan arkay falanqeyntan oo lagu sameeyay degello badan. Waxaan ku soo gabagabeeyey in websaydhyada aan waxqabadka wanaagsan ka qabanayn qiimeynta mashiinka raadinta ama marin kasta oo gaar ah oo loo soo saaro taraafikada sidoo kale ay leeyihiin heerar aad u hooseeya oo haynta ah. Websaydhyada qiimeeya kuna sawira taraafikada joogtada ah waxay ku faanaan heerarka haynta sare. Waxaan rajeynayaa inaad hadda falanqeyn karto heerka haynta ee websaydhkaaga. Laakiin, su’aasha xigta waxay tahay xagee loo adeegsan karaa falanqeyntan? Jawaabtu waa tan ugu wanaagsan ee loo isticmaalo falanqaynta degellada iyo barnaamijyada moobiilka.
Falanqaynta Kooxda ee Codsiyada Moobaylka
Sababtoo ah xaqiiqda ah in boqolkiiba tiro badan oo dadka ka mid ah ay hadda isticmaalaan taleefannadooda casriga ah ama kaniiniga si ay uga baaraan internetka, barnaamijyada moobiillada ayaa maalmahan kor u kacayay. Taasi waxay ka dhigaysaa falanqaynta habdhaqanka isticmaalaha ee barnaamijyada moobiilka mid aad muhiim ugu ah sii wadida koritaanka. Haddii aad la yaabban tahay inta ay isticmaaleyaashu la falgalaan barnaamijkaaga moobiilka, inta jeer ee isticmaaleyaashu ay furaan barnaamijka maalin gudaheed, ama sida barnaamijku u mashquulsan yahay, waxaad ka heli kartaa dhammaan jawaabahaaga adoo samaynaya falanqaynta Kadib, waxaad yeelan doontaa aqoon aad ku sameyso istiraatiijiyad muhiim ah oo kor u qaada joogitaanka shirkaddaada.
Sidoo kale, markasta oo aad cusbooneysiin ku sameyso barnaamijkaaga moobiilka, waxaad awoodi doontaa inaad si muuqata u aragto saameynta horumarka. Haddii heerka sii-hayntaadu hoos u dhacdo, markaa waxay muujineysaa in laga yaabo inaad wax seegtay oo isticmaaleyaashu ma jecla natiijooyinka ugu dambeeya. Waxaad markaa u adeegsan kartaa fahamkaaga habdhaqanka isticmaalaha si aad uga dhigto cusbooneysiinta soo socota mid aad u wanaagsan. Isbeddel kasta oo ku yimaada habdhaqanka adeegsadaha moobiilka si fudud ayaa loola socon karaa loona ogaan karaa si uu u kiciyo dadaalkaaga xiga ee ku aaddan kaqeybgal badan
Hoos waxaa ku yaal tusaale falanqeyn kooxeed lagu sameeyay barnaamij mobilo ah oo ay adeegsadaan 8,908 isticmaale toddobaadle ah. Sida aad aragto, celceliska heerka haynta wuxuu ahaa 32.35% maalinta 1, taas oo yareysa maalinba maalinta ka dambeysa. Xogtaan, waa inaad bilowdaa inaad diirada saarto sida loogu ilaalin lahaa adeegsadayaasha inay ku mashquulsan yihiin arjiga si sicirka haynta uu u kordho iyadoo isticmaaleyaal badani ay furayaan barnaamijka maalin kasta. Mar alla markii ay kacdo, waxaa jiri doona isbeddel sare oo ah helitaanka martida cusub sababta oo ah afka ku faafin.
Dejinta Warbixinta Falanqaynta Kooxda
Markaad furtid Google Analytics si aad u sameyso falanqayntaada, waxaad ogaan doontaa in warbixinta lagu habeyn karo iyadoo lagu saleynayo nooca kooxda, tirada kooxda, qiyaasta, iyo taariikhda kala duwan.
Nooca Koowaad - Xilligan, nooca beta wuxuu kuu oggolaanayaa oo keliya inaad marin u hesho taariikhda la wareegitaanka, sidaas darteed waxaad arki kartaa habdhaqanka isticmaaleyaasha booqday goobta taariikh cayiman iyo sida ay u dhaqmayeen muddo waqti ah.
Xajmiga Cohort - Tani waxay loola jeedaa isbeddelka cabbirka wada-jir ahaan maalmo, toddobaadyo, ama xitaa bilo. Isku habeynta warbixintaada oo ku saleysan cabirka wadajirka waxay kaa caawin kartaa inaad hesho inta booqdayaashu soo booqdeen Janaayo oo ay soo noqdeen bishii Febraayo. Markaad dooranaysid tirada kooxda, waxaad dooran kartaa taariikh kala duwan oo ah toddobo, 14, 21, ama 30 maalmood inta aad dooranaysid cabbirka toddobaadyada.
Metric - Tani waa waxa kaliya ee aad doonayso inaad cabirto. Waqtigaan, cabbiraadaha waxaa kujiri kara isweydaarsiga isticmaale kasta, aragtida bogga booqde kasta, fadhiyada martida, aragtida barnaamijka macaamiil, haynta isticmaalaha, dhammeystirka yoolka, beddelka, iwm.
Taariikhda Range - Tan, waxaad ku kala duwanaan kartaa taariikhda u dhexeysa maalmaha, toddobaadyada, iyo bilaha iyadoo kuxiran tirada kooxdaada.
Waxa kale oo suurtogal ah inaad adigu ku socodsiiso falanqaynta qaybaha kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad eegi kartaa celceliska waqtiga kal-fadhi ee booqdayaasha aaladda mobilada iyo kuwa soo booqda adoo adeegsanaya kombiyuutar kumbuyuutar ah. Ama, waxaad ku habeyn kartaa warbixinta ku saleysan soo iibsashada cusub ee soo booqda inta lagu jiro usbuuc gudihiis, sida usbuuca ka hor Kirismaska ​​2014. Tani waxay sameyn kartaa waxay muujineysaa in dadka ku soo booqda websaydhkaaga ay waqti badan ku qaataan goobta iyagoo isticmaalaya kombuyuutar desktop ah, gaar ahaan kahor Kirismaska.
Ha niyad jabin haddii falanqaynta koox-kooxeed ay adag tahay in la fahmo markii ugu horeysay maxaa yeelay waqti ayaad ku qabsan doontaa. Waa muuqaal aad u faa'iido badan oo kuu oggolaanaya inaad falanqeyso jawaabta daahsan ee isticmaalayaasha si toos ah adoo adeegsanaya qalabkaaga Google Analytics. Khasaarinta xogtan dhabta ah waxay kaa caawin kartaa inaad horumar cusub oo soo jiidasho leh ku sameyso websaydhkaaga iyo / ama abka mobilada si aad si fiican ugu beddelato.
Tags: Analyticsisku duubnifalanqaynta kooxdaAnalytics googlegoogle Analytics koox kooxeedwaa maxay falanqaynta kooxda
Qalabka Macaamiisha Wajahaya iyo Sidaad Ugula suuq Geyn Kartid
Sida Loo Geeyo Istaraatiijiyad Qalabaynta Suuqgeynta Guusha
May 15, 2015 at 5: 58 AM
Tusaalaha aad ku muujisay tan ee barnaamijka moobiilka. Appkee ah?
Jul 23, 2015 markay ahayd 4:49 AM
Aad baad ugu mahadsantahay Shane waqtigaaga inaad noo sharaxdid falanqaynta Cohort. Runtii waxay ahayd akhris wanaagsan! Waxaan helnay dhowr emayl oo wax laga weydiinayo kooxdan laakiin hadda waxaan siin karnaa xiriiriyahaaga 😉
May 13, 2016 at 1: 18 AM
Si fiican ayaa loo sharaxay!